Technorati Relaunches Tools Page... with some Cool Tools! | Martech Zone
Dorion Carroll kaliya ayaa iga soo qoray Technorati and they've ‘retooled' their Blogger's Tools page with a soft launch of some new Technorati blogging tools. You guys know that I'm a Technorati nut!
Waxaan qoray Tiknoolajiyadda Darajada Teknolojiyada for WordPress a few weeks ago. I used quite a few technologies to make writing the plugin a little easier (cURL, PHP5, SimpleXML, WP-Cache, etc.) so I've gotten some pushback that it doesn't work with many hosts.
Akhristayaasha degelkeygu way heli karaan 12 bilood oo ah BILAASH LACAG LA'AAN! Ku dhufo gunta my Ku saabsan bogga muddo 12 bilood oo bilaash ah aniga iyo martigaliyahayga.
Akhriso Cunteyda oo hel 12 Bilood oo ah Marti Gelinta Webka Bilaashka ah
Apr 2, 2007 at 4: 16 AM
Waxaan kuugu hambalyeynayaa jabinta 3000 ee ugu sareysa Technorati:
Darajo: 2,987 (1,465 xiriiriye oo ka socda blogyada 732)
Si fiican ayaan uqalmay, saaxiibkay
Apr 2, 2007 at 11: 25 AM
Mahadsanid! Anigu ma aanan sameyn karin dhammaantiin la'aantiin. Waxaan ubaahanahay hadafyo cusub, hadafkeygu wuxuu ahaa 5,000 sanadkaan. Ma aanan ogeyn in markii aad ku sii korodho aqbalaadda, ay darajadaadu runti si dhakhso leh u korayso markaad fuusho. Waxaan u maleynayaa mar alla markii aad gasho 500 ee ugu sarreysa ay bilaabeyso inay mar labaad hoos u dhacdo.
Aan rajeyno inaan labadeenaba ogaanno!
Apr 2, 2007 at 8: 51 PM
WoW .. oo ka hooseeya 800 hadda ?? taasi waa waali cajiib ah !!!!
Apr 2, 2007 at 8: 52 PM
Waxaan jeclaan lahaa! Taasi waa tirada baloogyada isku xiraya. Waa waxa Technorati ay ugu yeereyso 'darajada hey'ad'.
Waxaan u imid degelkan adoo adeegsanaya qalabkaaga Teknolojiyada oo aad ayaan u xiiseynayaa faallooyinka la soo dhejiyay. Marka waxaan go aansaday inaan isdiiwaangaliyo oo aan arko meesha ay marto. Waad ku mahadsantahay hada…
Waa hagaag Dave, waxaan rajeynayaa inaad ag joogtid! Ii sheeg haddii ay jiraan mowduuc aad jeceshahay inaan wax ka qoro.
Waad ku mahadsantahay inaad ii ogeysiisay inaad halkaan joogtay! 🙂
Jun 24, 2007 at 6: 04 PM
Waad ku mahadsantahay waxbadan qalabkaaga. Waxaan u dhigayaa inuu shaqeeyo mid ka mid ah maalmahan.